Qaraxyo xoogan oo ka kala dhacay Magaalooyinka Dimishiq iyo Ximis ee wadanka Suuriya. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
On Feb 22, 2016 197 0
Sil silado Qaraxyo oo aad u xoogan ayaa gelinkii dambe ee maalintii Axada ee shalay waxay ka dhaceen magaaloyinka Ximis, iyo Dimishiq oo ah caasimadda dalka Suuriya.
Xaafadda Al-Sayidatu Zaynab ee bartamha Dimishiq ayaa waxaa ka dhacay weeraro Qaraxyo ah oo ay kamid yihiin Istish-hadiyiin, kuwaas oo si aad ah looga maqlay guud ahaan magaalada, waxaana weeraradaasa fuliyey rag katirsan dowladda Islaamiga ah oo suumanka qarxa soo xirtey.
Xaafadan oo ay degaan qoyska uu kasoo jeedo Bashaar ee Calawiyiinta iyo Nuseyriyada ayaa Qaraxyada ka dhacay waxa khasaare lixaad leh lagu gaarsiiyey Nusayriyada, waxaana weerarada oo laba ahaa ay ka kala dheceen laamiyada waweyn ee kala ah Al-Tiin iyo Al-Faadhimiyah.
Sida lagu sheegay bayaan horudhac ahaa oo kasoo baxay wilaayada Dimishiq ee dowladda Islaamiga ah, waxaa weeraradaas ku dhintey 90 Ruux, halka 170 kalana ay dhaawcmeen, balse wararka rasmiga ah ee saaka la helayo waxay sheegayaan in dhimashadu ay gaartey 150 Ruux oo dhamaantooda ah Nusayriyada Bashaar Al-Asad ku taageeraaya gumaadka uu ku hayo dadka Muslimiinta ah.
Dhanka kale magaalada Ximis ayaa iyadana waxaa ka dhacay weeraro xoogan oo Qaraxyo ahaa.
Sida ay sheegeen dad goob joogayaal ah oo la hadlay warbaahinta, laba Baabuur oo walxaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa lagu baakimiye goobo kala duwan oo kamid ah Xaafadda Al-Zahraa ee ay degaan Calawyihiinta.
Qaraxyada ayaa dhacay xilli Calawyiintu kusii jeedeen xafiisyada xukuumadda Nuseyriyada, waxaana Qaraxyada oo halmar wada dhacay ka dhashey dhimashada 57 Ruux, halka Tobanaan kalena ay dhaawacmeen.
Gudoomiyaha Ximis ee Nidaamka Nusyriyada oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in Qaraxyadu ay khasaare xoogan ay sababaeen, isagoona intaa ku daray iney aad u xooganaayeen.
Xaafadaha kala duwan ee Ximis ayaa dhawaanahan waxaa ka dhacay weeraro xoogan oo ay fulinayaan Mujaahidinta halkaas ka jihaada, waxaana la xusuustaa in magaaladaas si dhagar ah looga soo bixiyey kooxaha Mucaaradka ee ka dagaalamayay, islamarkaana haatan waxaa magaalada badankeeda maamula Nidaamka Nusayriyada.
Kadib Qarayxadan labada ahaa ee khasaaraha badan dhaliyey, tobanaan katirsan Calawayiinta dega Ximis ayaa banaan bax dhigay, kaas oo ay ku dalbanayaan inuu xilka iska cazilo gudoomiyaha gobolka Ximis oo ay ku eedayeen inuusan amaanka waxba ka qaban karin.
Axmad 4878 posts 11 comments